THEFORANYAUTOGROUP FORANYAUTO.COM 1-888-ELK-GROVE Trademark of Driebe, John Mark. Serial Number: 77076364 :: Trademarkia Trademarks
On Thursday, January 4, 2007, a U.S. federal trademark registration was filed for THEFORANYAUTOGROUP FORANYAUTO.COM 1-888-ELK-GROVE by Driebe, John Mark, Elk Grove, CA 95757. The USPTO has given the THEFORANYAUTOGROUP FORANYAUTO.COM 1-888-ELK-GROVE trademark serial number of 77076364. The current federal status of this trademark filing is CONTINUED USE NOT FILED WITHIN GRACE PERIOD, UN-REVIVABLE. The correspondent listed for THEFORANYAUTOGROUP FORANYAUTO.COM 1-888-ELK-GROVE is CHRISTOPHER J. DAY of *****, *****, ***** ***** . The THEFORANYAUTOGROUP FORANYAUTO.COM 1-888-ELK-GROVE trademark is filed in the category of Advertising, Business & Retail Services , Construction and Repair Services . The description provided to the USPTO for THEFORANYAUTOGROUP FORANYAUTO.COM 1-888-ELK-GROVE is Automobile dealerships; Dealerships in the field of automotive parts, and automotive accessories.